Armenia · Oktobra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Armenia · Oktobra, 2018
Marsa 2018 3 Lahatsoratra
Janoary 2018 1 Lahatsoratra
Janoary 2008 8 Lahatsoratra
Tantara mikasika ny Armenia tamin'ny Oktobra, 2018
Fitetezana bilaogy manerantany isaky ny alarobia (jona 2006)
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana18 Oktobra 2018
Manana sary avy ao amin'ny tranoben'ny Fitsarana Tampony ao Bishkek, Kirghizistan i Nathan ao Registan, izay olona an-jatony no nanafika ny tranobe mba handroaka ireo mpanao fihetsiketsehana izay nibodo ny trano hatramin'ny volana Aprily. (Nitaky ny fialàn'ireo manampahefana rehetra notendren'ny filoha teo aloha Akayev ireo mpanao fihetsiketsehana.)
Armenia: Straight mankany an-tanàna
Eoropa Andrefana18 Oktobra 2018
(2012) Miaraka amin'ny tahan'ny Harinkarena faobe isan-taona izay tombanana ho $5,400 eo fotsiny tamin'ny 2011, iray amin'ireo firenena mahantra indrindra tao amin'ny Firaisana Sovietika taloha i Armenia. Tena azo tsapaintànana ny toedraharaha ho an'ireo tanàna ao amin'ilay firenena lavitra andriana, fa manantena ny hanova izany rehetra izany ny diplaomaty iray.
Hita eny rehetra eny ny antoko Armenia Feno Fanambinana!!!
Fifidianana03 Oktobra 2018
Hatramin'ny "@21-03-2007 tamin'ny 09:07:00" nitatitra i Narjan fa niraikitra teo amin'ny rindrin'ny lapan'ny filoham-pirenena tao Yerevan ny teny hoe "DOD", izay nofafana haingana mba hanimbana ny fifalian'ireo bilaogera izay nankasitraka ny fahombiazan'ny asa fanadiovana, na dia izany aza.
Ireo pejinay momba an i Armenia